Soo saaraha Tuuboyinka ugu fiican ee Taper iyo Warshad | Gimarpol
Gimarpol's Tapered Drill Rod oo leh qayb laba-geesood ah oo chuck ah si loo bixiyo ka faa'iideysiga wareegga wareegga wareegga. Badanaa waxay leedahay dabool been abuur ah si loo ilaaliyo booska wajiga shanqadha ee ku habboon dhagaxa dhagaxa, iyo xoogaa daloolin dhafan oo dhamaadka ah. Dhererka birta ah ee la duubay ayaa laga qiyaasaa qoorta ilaa dhamaadka xoogaa.
Magaca Badeecada: Qodida Rod
nambarka No.:B19 B22
Midab: Madoow, Buluug, Guduud ama sida aad u codsatay
Cabir: Sidaad u codsatay
Faa'iidada: Nooc caan ah oo caan ah, tayo sare leh,
kormeer adag iyo tijaabin, adeeg wanaagsan iibka kadib.
Geerida wax ku oolka ah: 1000-4500 MM
Astaamaha: Hubso nolosha qodista wanaagsan adigoo isticmaalaya carbide tungsten ka sarreeya.
Tikniyoolajiyadda alxanka qadiimiga ah iyo baaluq ayaa xaqiijinaya tayada ulaha wanaagsan.
daweynta kuleylka si loo hubiyo tayada usha.
Xirmo: Kiis alwaax ah ama sidii aad u codsatay
Wakhtiga la bixinayo: 3 davs ka dib markii la xaqiijiyay bixinta
Gimarpol's Tapered Drill Rod oo leh qayb laba-geesood ah oo chuck ah si loo bixiyo ka faa'iideysiga wareegga wareegga wareegga. Badanaa waxay leedahay dabool been abuur ah si loo ilaaliyo booska wajiga shanqadha ee ku habboon dhagaxa dhagaxa, iyo xoogaa daloolin dhafan oo dhamaadka ah. Dhererka birta ah ee la duubay ayaa laga qiyaasaa qoorta ilaa dhamaadka xoogaa. Godadka badanaa waxaa lagu qodaa 0.6 m koror ah si loogu dhejiyo dhererka quudinta lugta hawada. Birta la qoday ayaa la soo saaray waxaana lagu raacay xoogaa yar oo dhexroor dhagax ah oo dhererkiisu dhererkiisu yahay birta xigta ee isku xigxiga.
Ulaha qodista waxaa loo qaybiyaa seddex qaybood: ulaha kelly, ulaha qodista iyo ulaha daloolinta culus. Isku xigxiga iskuxiraha waa kelly (1) + tuubada qodista (n, oo lagu go'aamiyay qotoda dheer ee ceelka) + dhuumaha layliga ee miisaanka leh (n, oo lagu go'aamiyay qaabeynta isku dubaridka qalabka daloolinta).
Keligu wuxuu ku yaal meesha ugu sareysa ee xadhigga daloolinta, waxaana jira laba nooc oo laba jibbaaran iyo laba geesood leh .
Marka la qodayo, usha kelly-ka waxaa lagu waafajinayaa xudunta iyo ujawaabidda si loogu wareejiyo miisaanka wareegga dhulka usha qoditaanka si loogu kaxeeyo xarigga daloolka iyo qodista si ay u wareegto;
Qaadashada miisaanka buuxa ee xadhigga daloolka;
Kanaalka wareejiya dareeraha qodista.
Kalluunka kelly wuxuu ka kooban yahay kala-goysyada sare iyo hoose iyo jir tuubbo leh. Jirka tuubada ayaa leh laba qaab: tetragonal ama laba-geesle (inta badan saliida qodida waa tetragonal); wadajirka sare waa dun dheddig bidix ah (buckle gadaal), oo ku xiran qasabada, iyo dunta bidix ee gacanta bidix waxay ka hortageysaa in la jarjaro inta lagu jiro wareegga; wadajirka hoose Waa dun gacan-midig ah oo gacan-midig ah, oo ku xiran tuubada layliga. Markaad shaqeyneyso, dhamaadka sare ee usha kelly-ga ayaa had iyo jeer ka sarreysa dusha ujawaabidda, qeybta hoosena waxay ka hooseysaa dusha ujawaabidda.
Tuubada layliga waa qaybta aasaasiga ah ee xarigga daloolinta. Shaqadeeda ugu weyni waa gudbinta tiknoolajiyada iyo dareeraha qodista gaadiidka, iyo in la sii qoto ceelka si joogto ah iyadoo si tartiib tartiib ah loo dheereynayo dhuumaha layliga. Sidaa darteed, tuubada qodista waxay kujirtaa boos aad muhiim ugu ah qodida saliida.
Qaab dhismeedka dhuumaha la qodo Tuubbada layliga waxay ka samaysan tahay biibiile bir ah oo aan xadi lahayn oo leh dhumucdiis oo derbigeedu yahay 9-11mm. Jirka biibiile iyo kala-goysku waa iskuxidhan yihiin alxanka khilaafku.
Tuubbo daloolin culus
Dhuumaha layliga culus wuxuu la mid yahay tuubada qodista batroolka, laakiin sidoo kale tiirar bir ah oo godan oo dhererkiisu yahay 10 mitir. Si kastaba ha noqotee, culeyska hal ul ayaa ka culus tan tuubbooyinka qodista saliida, dhumucda darbiguna waa 2 ilaa 3 jeer ka badan usha daloolinta. Usha layliga culus waxay kuxirantahay inta udhaxeysa layliga iyo qoorta daloolinta si looga hortago dhaawaca daalka sababo laxiriira isbadalka qeybta iskutallaabta daloolka. Waxa kale oo ay beddeli kartaa qayb ka mid ah doorka qolofka daloolinta, laakiin ganaaxiisu wuu fudud yahay, hawlgalka bilowga iyo socodkuna waa ku habboon yahay, kaas oo badbaadin kara waqtiga bilowga iyo orodka.
Waxaa jira laba dhexroor hex bir ah oo caadi ah - 22mm ama 25mm. Iyo waxoogaa duudduuban iyo ulahayagu waxay ku yimaadaan xagallo kala duwan (7 darajo, 11 darajo, 12 darajo)
Ulaha Gimarpol ee la duubay ayaa lagu heli karaa daaweyn heerkulkeedu sareeyo ama si buuxda u leh kaarboonoolaha.
Xagasha Taper ： 7 °, 11 °, 12 °
Ballaca Godka ： H19 ， H22 ， H25 MM
Hore: Dhuunta dhuunta dhuxusha
Xiga: Layli dhagaxa oof-wareenka ah